Ubomi obufutshane kunye neProfayili kaJon Jones
Midlalo MMA & UFC
Ukubona umqhubi we- MMA uJohn Jones ukuncintisana kwanaxa uphathwe. Uvele wenza izinto abanye abaphangi abazenzayo. Ukuqhayisa iinqanawa ezisezantsi, ukukrazula okungaqhelekanga, ukukhwabanisa, ukulungelelanisa konke okulungileyo.
Vele ucele abachasi kunye nabaqeqeshi bakhe. Akuyena umkhosi wakho wansuku zonke. Kwaye ibali lakhe ibali.
Usuku lokuzalwa kunye nosapho
UJon Jones wazalwa ngoJulayi 19, 1987, eRochester, eNew York. Uyise ungumfundisi kwiCawa lePentekoste e-Endicott, eNew York, ngelixa unina ngumongikazi.
Unomzalwana omdala (uArthur) kunye nomntakwabo omncinci (Chandler). Udade omdala kaJon uKarmen wafa ngumhlaza ngaphambi kokuzalwa kwakhe kwe-18.
UJones kunye nentsapho yakhe bakhokelwa yiyo yonqulo. Ngokuhambelana nalokhu, unabanye abaFilipi 4:13 abathinteka kwisifuba sakhe, ibali likaDade eliyithandayo. Kananjalo unabalinganiswa baseTshayina azinye kwiimbambo zakhe ezazicinga ukuba zimelela igama lakhe udade, kodwa kamva wafumanisa ngokucacileyo igama elithi "umkhosi onoxolo."
UJohn uqeqeshelwa ukulwa nokuxhaswa kukaJackson e-Albuquerque, eNew Mexico. Ulwa ne- UFC .
Njengomdlali omncinane njengoJones, ucinga ukuba akayena mdlali obalaseleyo kwintsapho yakhe. Ngaloo nto, umntakwabo uArthur wayengumdlali onqabileyo kwibhola lebhola kunye nokulwa ephakamileyo. Emva koko waqhubeka edlala ekhaleni laseSirakusi, apho i-6-foot-3, i-pounder yaba yi-leader of school in the fight for loss and 38.5.
U-Arthur wathatyathwa kwinqanaba lesihlanu le-2010 ye-NFL eyilwayo yi-Ravens yaseBaltimore. Ukongezelela, umntakwabo kaJon, uChandler, unempembelelo, ekupheleni kokuzikhusela kwi-New England Patriots.
UJ Jones waqala ukuqeqeshwa kwi-MMA xa efumanisa ukuba intombi yakhe ephakamileyo yamantombazana, uJessie, ukhulelwe intombi yakhe uLeah.
Wayeqonda ukuba wayengenayo okwaneleyo njengenkxaso yokuxhasa yakhe intsapho, ngoko ke wangena kwisibonelelo sokuqeqesha iBombSquad ngengcamango yokwenza imali njengomqhubi we-MMA. Nangona ayenakho ukungeniswa ngokusemthethweni okanye ukuqeqesha, ekugqibeleni kweeveki wawuthatha uMMA wakhe wokuqala ukulwa noBrad Bernard ngo-TKO ngo-Apreli 12, 2008. Kamva, i-UFC yamthatha. Uphumelele ukulwa kwakhe okokuqala ngo-Andre Gusmao kwi-UFC 87 ngesigqibo.
Uyise kaYones wayekade engumlindi kwaye wakhuthaza le ndlela phakathi kwamakhwenkwe akhe, abahlala bexabana baze baxoxe. Emva koko uJones waya kwi-Union-Endicott High School, apho waphumelela ulwaphulo-mthetho lwamazwe angama- Ekugqibeleni, waya e-Iowa Central Community College apho waba ngumbutho wesizwe we-Junior College kunye ne-degree of Associate.
Imvelaphi yokulwa kaJones iyacaca xa elwa, ngokuba ukukhwela kwakhe, ukuthatha ukukhusela, kunye nezakhono zokulawula umhlaba zibalaseleyo. Nangona kunjalo, oku akunjalo okuchaza indlela yakhe yokulwa. Kunoko, iyakwazi ukugqithiswa ngokugqithiseleyo.
Iidrafti zakhe zidla ngokugqithisileyo kunye nezobugcisa. Ukubetha kwakhe kukumangalisayo kumdlalo wezemidlalo, kunye neentambo zokutshiza kunye ne-unorthodox ukukhaba ngokuqhelekileyo.
Ngaphezu koko, uhlaba njengeloli. Ngokwenene, uJonas ungumlwi odibeneyo kumntu ongazange alwe ixesha elide, kwaye umdlalo wakhe ubonakala ngokucacileyo.
UJones uhlala noJennie, lowo uhlala naye. Zineentombi ezimbini ezithiwa nguLeya noCarmen Nicole.
Eminye yamanqoko kaMon Jones Omkhulu kunabo bonke
UJonas unqobe uDaniel Cormier ngesigqibo esivumelanayo kwi-UFC 182: I- cormier yayingumdlalo kwaye yaphumelela kule mpi. Wayenazo izakhono ezilungelelanisa uJones eziye zaza zahlasela eMMA, kwaye inkulumo engaphambili yokulwa ne-trash yayingummangaliso. Kodwa ekugqibeleni, uJonas waxabela waza walwa nomchasi wakhe. Kwakuyimbonakaliso emangalisayo, ofanelekileyo yeqhawe.
UJonas unqobe u-Alexander Gustafsson ngesigqibo esisigxina kwi-UFC 165: UJonas waxhatshazwa okokuqala ngolu hlobo. Izinto zazikhangeleka ngokumelene nomphengululi owayengumlinganiselo wakhe kunye nobuchule bakhe.
Kodwa ke, njengabaqhawe abakhulu, wabuya-kule ngxaki ngoku kuluhlu oluqhelekileyo olujikelezayo. Kwaye ukusuka apho, kwaba ngumbukiso wakhe njengoko ebuye evela ekujuleni kwethemba ukuze anqobe ukulwa okukufutshane komsebenzi wakhe kuze kube yimhla.
UJones unqobe uRashad Evans ngesigqibo esisigxina kwi-UFC 145: UJonathan no-Evans baqeqeshane ndawonye kwi-MMA ka-Jackson ngaphambi kokuba uJones avume ukulwa nomlingani wakhe woqeqesho ngaphambili. Oku kukhokelela ekubeni igazi elibi kunye noVev bashiya inkampu. Nangona igosa laseTUF langaphambili lalwela nzima kwaye lanika uJones mhlawumbi iqhube kakuhle kakhulu kwimali yakhe yomsebenzi, ekugqibeleni, ukuphumelela kwintlonelo nokulwa kwakubonakala.
UJones unqobe uMauricio "Shogun" uRua ngeTKO ye-third-round kwi-UFC 128: UJona wagqogqa uShogun, owayeyinkwenkwezi yangaphambili kunye ne-current UFC Light Heavyweight Champion. Ngokutshatyalaza umgca ngokucacileyo, waphinde womeleza isikhundla sakhe njengenyaniso enkulu kumdlalo. Ngaphandle koko, ukuphumelela kobuqili be-UFC rhoqo kwenza uluhlu lwakho lokunqoba okukhulu, akunjalo?
U-Jones unqobe uStephan Bonnar ngesigqibo esisigxina kwi-UFC 94: UJonathan wabonisa umdlalo ekunqobeni umthandi othandekayo kulo. Ukukhahlela ngokukhawuleza ukukhahlela , ukujiya iindlovu, kunye nokunye kwakuboniswa ngexesha lokusebenza kukaJones apha. Ngempumelelo, abalandeli ngokwenene baqala ukuqonda i talente ababeyiphambi kwabo.
I-Top 10 no-Anderson Silva ukunqoba